Soomaaliya oo codsatay in Ciidamo lagu soo xoojiyo AMISOM • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Soomaaliya oo codsatay in Ciidamo lagu soo xoojiyo AMISOM
Soomaaliya oo codsatay in Ciidamo lagu soo xoojiyo AMISOM
February 2, 2010 - By: Khalid Yusuf
Waxaa maanta lagu wadaa in lasoo gab gabeeyo shirkii sadexda maalmood ahaa ee Midowga Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa.
Qodobada laga hadlayo maanta ayey ku jiraan arrimaha dalka Soomaaliya, ayadoo ay jiraan codsiyo horyaal Shirweynaha oo ku aadan in dalalka Afrika ay ciidamo dheeraad ah u diraan dalka Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee dalka Soomaaliya Cali Ahmed Jangeli ayaa sheegay in ay ku rajo weyn yihiin in wadamada Afrika qaarkood ay soo bandhigi doonaan balan qaad ku aadan ciidamo dheeraad ah oo la geeyo magaalada Muqdisho.
Dalka Nigeriya oo asagu kamid ahaa wadamadii horey ubalan qaaday inay ciidamo u diraan dalka Soomaaliya, ayaa hada u muuqda in balan qaadkaasi dib ulla noqday, ayadoo dowlada Nigeriya sheegtay in dalka Soomaaliya aysan ka jirin nabad la illaaliyo.
Dalka Kenya oo kamid ah wadamada Jaarka la ah Soomaaliya oo asagu horey uga gaabsan jiray inuu faraha la galo dalka Soomaaliya, ayaa sheegay inay wax ka bedali doonaan siyaasadooda ku aadan Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Kenya Moses Watangula ayaa sheegay in Dowlada Kenya oo jaar la ah Soomaaliya, ay horey u go’aansatay inaysan faraha la gelin dalka Soomaaliya, balse wuxuu yiri siyaasadan waa noqon mid la bedalo hadii la rabo in Kenya ay ka qeyb qaadato gacan siinta Dowlada Soomaaliya.
Mr.Watangula ayaa sheegay in horey u jirtay go’aan ah in Wadamada Safka hore ee IGAD ee jaarka la ah Soomaaliya aysan ciidamo u dirin dalka Soomaaliya, balse go’aankaasi kadib wax badan is bedaleen.
“…Itoobiya ciidamo ayey u dirtay Soomaaliya, hada Jabuuti ciidamo ayey balan qaaday inay u direyso Soomaaliya,..Marka Kenya siyaasadeedana waa mid ku haboon xiligan in wax laga bedalo….” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibada ee dalka Kenya.
Shirweynaha 14aad ee Midowga Afrika ayaa lagu wadaa in maanta gelinka danbe lasoo afjaro ayadoo lagu wado in halkaasi laga soo saaro go’aanada ay ku heshiiyeen Hogaamiyaasha Afrika.
Tagged With: Midowga Afrika